Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya oo shir Ku qabatay Guriga Baarlamaanka UK 24/11/2015+Sawiro
Jaaliyada Ogadeniya oo shir Ku qabatay Guriga Baarlamaanka UK 24/11/2015+Sawiro
Hoos Ka daawo Sawirada: Shirka Baarlamaanka UK iyo Jaaliyada Ogaden ee UK.
Dhagaysi loo sameeyay Qadiyada Ogadeniya oo lagu qabtay Guriga Baarlamaanka Dalka UK ayaa waxaa kasoo qeyb galay Xubno kamida baarlamaanka Dalka UK kuwaasi oo dhageystay Xabsiyada Dalka Ethiopia Maxaabiis ku xidhan oo uu kamid yahay Bashiir Makhtal oo heysta Dhalasho Canadiana, Suldaan Fowsi Maxamed Cali oo ah Odey dhaqameed, Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo ahaan jiray Madaxa Amniga UN ee dhulka Ogaden iyo Maxaabiis kale oo kamida Qowmiyadaha Kale ee Ethiopia oo kamid yahay Andergachew Tsige oo heysta dhalasho British ah, Eskender Nega oo ah Suxufi kasoojeda Qowmiyada Axmaarada iyo Olbana Lelise oo aha Qowmiyada Oramada iyo Maxaabiis kale oo kamida Muslimiintii Mudaharaadyada lagu qabtay. Waxaa kale oo looga Hadlay kumanaanka kun ee ku Jira Jeel Ogaden iyo Tacadiyada soo gaadha Maxaabiistaasi.
Dhagaysigan Waxaa soo qaban qaabiyay Ururka Third World Solidarity Waxaana Furay Gudomiyaha Ururkaas oo ah Xubin kamida Baarlamaanka Dalka UK ( Dave Anderson MP) isaga oo ahaa Shirgudoonka waxa uu u mahad celiyay Xubnaha Baarlamaanka ee kasoo qeyb galay Kulankan. Sidoo kale waxa uu u mahad celiyay jaaliyada Ogadeniya, Ururka Amnesty International, Haayada Repreive iyo Xubnaha Third world Solidarity oo suurto galiyay shirkan. Xildhibaan Anderson oo shirkan bilowgiisii illa dhamaadkiisi Jogay waxa uu ku wareejiyay Patricia Bartley, oo ah Gudomiyaha Amnesty International ee Dalka Ethiopia.
Patricia Bartley waxay mid mid u sharaxday xunnihii ka hadlayay kulankan oo diirada si gooni ah loogu saaraxay Maxaabiista ku xidhan dalka Ethiopia ee cadaalad darida ugu jira xabsiyadaas. Xubnahaas meesha ka hadlay waxaa kamid ahayd Juweriya Cali oo ka hadashay Kiiska Bashiir Makhtal.
Juweriya waxay soo bandhigtay Taariikhdii Bashiir Makhtal iyo qaabkii loo xidhay oo ka hor imanaya qawaaniinta u taala dowladaha iyo xeerka caalamiga ah. Juweriya waxay sheegtay in lasii wada daayay dhamaan dadkii lala qabtay Bashiir Makhtal wali isagu laakiin uu ku jiro Jeel iyada oo ay adagtahay in si toosa looga warhelo xaaladiisa Caafimaad iyo waxa uu ku mutaysto Xabsiga. Bashiir oo ah muwaadin heysta Dhalashada dalka Canada, waxay Juweriya sheegtay Dowlada Canada inaysan u hagar bixin sidii muwaadinkooda uga soo deyn lahaayeen Jeelka ethiopia.
Juweriya ayaa sheegtay inay san aheyn kaliya dalka Canada in lagu fiirsado hanashada soo deynta Bashiir Makhtal balse ay tahay mid u taala wadan kasta oo ka shaqeeya illaalinta xuquuqda aadanaha iyo xeerka Adduunweynaha u yaala, Sidaas awgeed waxaa qasab ku ah dalka UK oo mucaawino badan siiya dalka Ethiopia innuu daraasad kusameeyo Kiiska bashiir Makhtal isla markaasna ay gacan ka geystaan sidii loo sii dayn lahaa muwaadinkaas Canadian-ka ah ee ku dhibaateysan Xabsiga Ethiopia. Fariintan ayaa si fiican loo dhageystay iyada oo su’aalo badan laga weydiiyay Juweriya Marxalada uu kusganyahay Bashiir Makhtal.
Dr Trevor ayaa sidoo kale ka waramay Marxalada Guud ee Maxaabiista dalka Ethiopia. Isaga oo sheegay in xabsiyada Ethiopia yihiin Xabsiyada ugu qalaad ee aduunka ka jira, halkaas oo qofka ku jira adagtahay in war iyo wacaal toona laga helo. Waxa uuna dowlada Dalka UK ku adkeeyay sidii loo dhowri lahaa xuquuqda Maxaabiista ee Ethiopia ku sugan. Kuwaas oo uu sheegay inay la kulmaan jidh dil iyo Ciqaabo illaa dhimasho Sababa. Waxaa kale oo Dr Trevor ka waramay Xaalada guud ee Xuquuql Insaanka iyo Dalka Ethiopia oo aan fiiro siinin ilaalilnta xuquuqda aadanaha. Waxa uu tusaale u soo qaatay Danbiyada daggaal ee ka dhanka ah Xuquuqda aadanaha ee loo geysto Shacabka Somalida Ogaden iyo Oromada iyo sida aan Ethiopia looga ogoleyn ururo Mucaarad ah iyo Saxaafad madaxbanaan toona.
Jackie Fry, oo kamida Qeybta Horsham ee Amnesty International UK ayaa iyana soo bandhigtay Kiiska Eskinder Nega oo ay in muddo ahba ololihiisa ku jireen. Ninkan oo ah nin suxufi ah kanasoo jeeda Qowmiyada Axmarada ayaa dalka Ethiopia lagu xidhay. Jackie ayaa sheegtay in safaarada Ethiopia ee ku taala London inay warqado badan u qoreen kana codsadeen in lasoo siiyo xogta iyo marxalada Maxbuuskan midaas oo Safaarada Ethiopia ee London dhagaha iyo indhaba ka dabosheen. Waxaana bilownay ayay tiri Banaanbaxyo joogto ah in aan ku sameyno safaarada Ethiopia ee London ku taala midaas oo noo saamaxday in xog yar oo kooban ay nasoo siiyaan. Jackie ayaa ka codsatay bulshadii kasoo qeb gashay shirkan in lagala shaqeeyo sidii kiiskan cadaadis loogu saari lahaa dalka Ethiopia iyo UK. Waxaa xasuus mudan Amnesty International Dhulka Ogaden iyo Ethiopia oo idilba waa laga soo saaray kamana howlgalaan gudaha dalkaas shaqaalaha amnesty ee Ethiopia waxay kusuganyihiin Dibadaha.
Zoe Bedford, oo kamida Loyarada Reprieve ee u dooda Andargachew Tsege oo ah muwaadin heysta dhalashada Dalka UK kuna xidhan dalka Ethiopia ayaa ka warantay iyana sidii loo afduubay maxbuuskan gacantana loogu galiyay Taliska Macangaga ah ee Ethiopia. Zoe ayaa sheegtay in dalka UK uusan kaalintiisi kasoo baxin waxna uusan u qabanin muwaadinkan lagu xukumay dilka toogashada ah islamarkaasna uusan helin cid matasha (Qaadi) oo u dooda muwaadinkan sida xaqdarada ah loogu gacan galiyay Dalka Ethiopia. Anaga oo ah Repreve iyo qoyska Andergache Tsege siwada jira waxaan si joogta ah uga codsanay dowlada UK inay kiiskan wax ka qabtaan islamarkaasna si cadaaladi ku jirto loola dhaqmo ama madaxbanaanidiisa loo siiyo Maxbuuskan midaas oo aan wali wadno cadaadiskaas sidii lagu soo deyn lahaa muwaadinkan una heli lahaa cadaalad.
Waxaa kale oo kulankan looga hadlay Maxaabiista Muslimiinta ee lagu qafaashay Banaanbaxyadii ka dhacay Addis Ababa iyo Kiis kale oo nin kasoo jeeda Qowmiyada Oromada oo uu soo bandhigay Awol Kasim oo ah Nin Macalin ka ah Jaamacada LSE ee London.
Waxaa intaas dabadeed lagudagalay Faah faahinta Xabsiyada Dalka Ethiopia iyada oo laga hadlay Xabsiga Jeel Ogaden ee ku yaala Magaalada Jig Jiga kaas oo lagu sheegay innuu kamid yahay Xabsiyada ugu khatarta badan ee kuu yaalada dalka Ethiopia. Xabsigaas oo lagu xidho dadka arrintooda lasiyaasadeeyay ee loo xidho arrimo siyaasadeed… ayaa lagu sheegay dhageysigan inaysan helin maxaabista Jeel Ogaden ku xidhan Cadaalad iyo Maxkamad toona iyada oo qofka lagu xukumo 15 iyo 20 sano inta u dhaxeysa dadkaas oo wax lagu heysto iyo cadeyn toona la hor keenin.
Waxaa kale oo laga hadlay in Dhulka Ogadeniya kajirin Maxkamadaha sare ee Federaalka oo racfaan qof qaadan karaa uusan jirin. Maxkamada Federaalka waxaa ugu dhow Dire Dawa halkaas oo aysan dadku nasiib iyo jaanis tooona u helin loona diido inay qaataan wax racfaan ah.
Waxaa kale oo intaas lagu daray in Xabsiyada kale ee ka jira Deegamada kale ee Ogadeniya ay yihiin kuwo qofka xukun la’aan la geeyo iyada oo aysan jirin wax xukun ah, balse ay isaga jiraan illaa iyo inta ay doonaan halkaasna lagu illaawo. Waxaa dhageysigan lagu sheegay inay jiraan dad xabsiyada ku jira oo waa hore ku dhintay walina aan loo sheegin eheladoodi kuwaas oo wali si joogto ah booqasho ugu taga xabsiyada iyada oo qofkoodii uu muddo dheer mootana.
Xubno Kamida Jaaliyada Ogadeniya ee UK ayaa sidoo kale shirkan uga hadlay Kiisas uu kamid yahay Suldaan Fowsi Maxamed Cali iyo Cabdiraxmaan Sheekh Xassan oo ah laba muwaadin oo u dhashay dhulka Ogadeniya ahaana dad ciso iyo karaamo ku dhex lahaa bulshada kuwaas oo Gumeysiga Ethiopia si sharci daro ah ku xidheen.
Suldaan Fowsi oo ah odey dhaqameed iyo Cabdi raxmaan Sheekh Xassan oo ahaa isna- Masuulka Amniga ee United Nation-ka uqaabilsan Ogsden -ayaa labadoodaba la xidhay kadib markii ay ka qeyb qaateen soo deynta dad Ururka ONLF gacanta ku hayeen. Labadan muwaadin ayaa lagu xukumay inay xidhiidh lasameeyeen Ururka ONLF. Arrintan ayaa aad uga yaabisay xubnihii Baarlamaanka ee kasoo qeyb galay kulankan in dad shaqo wanaagsan qabtay oo soo madax furtay dad dhibanayaal ahaa in lagu eedeeyo oo xabsiyo dhaa dheer ku mutaystaan. abaal gud ayay mudnaayeen mise Xabsi dheer. Arintaas ayaa daaha ka furtay Gumeysiga lagu hayo shacabka Ogadeniya.
David Anderson Shirgudoonkii shirkan ayaa waxaa la weydiiyay su’aalo aad u adag oo kamid aheyd- sidee Wadanka UK caawimo usiin karaa Wadan aan ogoleyn shuruucda caalamka oo diiday haayadihi samafalka, iyo kuwii qaramada midobay sida Red Cross, Amnesty international, MSF sidee wadanka UK wada shaqeyn u yeelan karaan. David ayaa ku jawaabay waa arrin u baahan in aan kawada shaqeyno cadaadis badana aan ku saarno dalkan, Waxaynu awoodaas yeelan karnaa markii aan doonta soo saarno xubno badan oo kale oo kamida Baarlamaanka UK. Shaqsi ahaan waxaan balan qaadi in cadaadis badan sameeyo warqado badana u diro qeybaha ay quseyso idina waxaan idinka codsanayaa in aad igala shaqeysaan oo MP-yo badan aynu wada kasbano gaar ahaan qofkastaba xaafadiisa MP-giisa innuu xidhiidh joogta ah la sameeyo kalana hadlo qadiyada Ogaden.
Shirkan oo ay kasoo qeyb galeen Xubno Badan oo kamida Baarlamaanka Dalka UK ayaa guul kusoo dhamaaday waxaana kasoo baxay qodobo wax ku ool ah iyada oo la qorsheeyay in la joogteeyo kulamada noocan oo kale ah oo 3 biloodba mar la qabto sii loo qiimeeyo waxsoo saarkii kulankan islamarkaasna lagu kasbado xubno badan oo kamida Baarlamanka dalka UK.